बुटवल उवासंघद्धारा आम्दाको कोभिड केयर युनिटमा आईसीयुका उपकरण प्रदान – Swasthya Samachar
बुटवल उवासंघद्धारा आम्दाको कोभिड केयर युनिटमा आईसीयुका उपकरण प्रदान
May 18, 2021 May 18, 2021 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्यसमाचार / बुटवलको सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल (आम्दा)मा स्थापना गर्न लागिएको कोभिड केयर युनिट अन्तरगत आईसीयु वार्ड स्थापना तथा सञ्चालनको लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले आवश्यक मेडिकल उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ ।
अस्पताल र संघ दुबै पक्षको सहमति अनुसार आज (मंगलबार) समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि समझदारी पत्र आदानप्रदान समेत गरिएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजू र साक्षिको रुपमा महासचिव बिमलराज भट्टराई तथा अस्पतालको तर्फबाट मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. राजेन्द्रप्रसाद बस्याल र साक्षिको रुपमा प्रशासकीय प्रमुख ध्रुवप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
सोही अनुसार संघले मंगलबार नै ५ थान प्यासेन्ट मोनिटर र ५ थान आईसीयु बेड उपलब्ध गराईएको संघका अध्यक्ष कसजूले वताए । संघले करिव ४० लाख रुपैंया बराबरको सामान उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कसजूले बाँकी ५ थान प्यासेन्ट मोनिटर र ५ थान आईसीयु बेड तुरुन्तै उपलब्ध गराउने बताए । दुई संस्था बिचको सहमति अनुसार संघले १० थान प्यासेन्ट मोनिटर र १० थान आईसीय बेड उपलब्ध गराउने छ ।
त्यस्तैगरी अस्पतालका मेडिकल सुरपरिटेन्डेण्ड डा. बस्यालले बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, बुटवल उपमहानगरपालिका र आम्दा नेपालको सहकार्यमा स्थापना गरिएको आम्दा अस्पतालमा विगतका दिनमा समेत संघले गरेको सहयोग उल्लेखनीय रहेको भन्दै आभार व्यक्त गरे ।
उनले संघ, नगरपालिका, आम्दा नेपाल र प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा सय शैयाको कोभिड केयर युनिट स्थापना गर्न लागिएको बताउँदै जति चाडो सामानको व्यबस्थापन हुन्छ त्यती चाडो कोभिड केयर युनिट सञ्चालन हुने वताए । जसअनुसार २५ बेड आईसीय, २५ बेड एचडीयु (डेडिकेटेड) र ५० बेड जनरल हुनेछन् ।
महिला तथा बालबालिकालाई उपचार सेवा दिँदै आएको बुटवलको सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल (आम्दा)ले कोरोनाका बिरामीलाई समेत उपचार सोव सुरु गरेको छ ।
गएको बैशाख ३० गतेबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा सुरु गरिएको र प्राथमिकताको आधारमा सुत्केरी महिला, अन्य महिला तथा बालकालिकालाई सेवा प्रदान गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्रप्रसाद बस्यालले वताए ।
उनले अनुसार तत्काल १० बेडमा कोरोना उपचार सुरु गरिएको र कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क हुनेछ । त्यस्तैगरी अस्तालले आज (मंगलबार)देखि पीसीआर परीक्षण समेत सुरु गरिएको वताए ।
समितिको एक्लो प्रयासले मात्रै अस्पतालको विकास असम्भव :अध्यक्ष भन्डारी
भारतको जस्तै ‘डबल’ र ‘ट्रिपल म्युटेन्ट’ कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखियो
Total Visit : 494602